Kitty For Me: October 2008
SHINee - Amigo [Repackage]
SHINee ရဲ့ Repackage Album လေး အရမ်းကောင်းတယ်။ Shinee World တစ်ခွေလုံးလဲ အရမ်းကြိုက်တာပါပဲ။ ဒီ Repackage Album ထဲမှာ သီချင်းအသစ် ၃ ပုဒ်ပါတယ်။ ၃ ပုဒ်လုံးမိုက်တယ်။ Amigo က အရမ်းမြူးတယ်။ အဲဒီသီချင်းနဲ့ အရင်တစ်ပတ်က Inkigayo မှာ promote လုပ်သွားတယ်။ က တာကတော့ ထုံးစံအတိုင်းပဲ ပြောစရာမလိုအောင်ကို ကောင်းပါတယ်။Forever or Never သီချင်းက ဆန်းတယ်။ သူတို့တွေ ငယ်ငယ်လေးနဲ့ အသံအရမ်းနိုင်ကြတယ်။ ထွက်တာလဲ ၁ နှစ်တောင်မပြည့်သေးဘူး။ နောက်တစ်ပုဒ်ကတော့ သူတို့ Single အခွေထဲက Love Should Go On ကို Remix ပြန်လုပ်ထားတာ။ အား...အခုတစ်လော ipod ထဲမှာ SHINee တစ်ခွေပဲရှိတယ်။ တစ်နေ့ကို ဘယ်နှစ်ခါ နားထောင်မိမှန်းတောင် မသိဘူး။ အရမ်းကြိုက်တယ်။
01. 아.미.고 (Amigo)
03. 산소같은 너 (Love like Oxygen)
05. 누난 너무 예뻐 (Replay)
06. 너 아니면 안 되는걸 (ROMANTIC)
07. 사랑의 길 (Love's Way)
08. 그녀가 헤어졌다 (One for me)
09. 화장을 하고 (Graze)
10. 마지막 선물 (Last Gift)(In my room - Prelude)
Download Part 1 [MF] Part2[MF] Part3[MF] Part4[MF]
ONEW [oh!! that's my boy ! :D]
Posted by Me at 7:05 AM 160 comments:
Soompi K-pop Music Chart October Week 4
Soompi Weelky K-pop Music Chart - October Week 4
1. (--) DBSG - 주문 (Mirotic) : 962 ***2WEEKS NO. 1 *** [4Shared][MF]
2. (+1) Wonder Girls - Nobody : 960 [4Shared][MF]
3. (-1) Brown Eyed Girls - 어쩌다 (How) : 928 [4Shared][MF]
4. (+5) Epik High - 1분 1초 (One Minute One Second) : 849 [4Shared][MF]
5. (+7) See Ya - Hot Girl : 789 [4Shared][MF]
6. (-1) Son Dam Bi - 미쳤어 (Become Crazy) : 697 [4Shared][MF]
7. (-3) 2PM - 10점 만점에 10점 (10 Out of 10) : 577 [4Shared][MF]
8. (+11) MC The Max - 눈물은 모르게 (Tears Without Knowing) : 500 [4Shared][MF]
9. (-3) Shinee - 산소 같은 너 (Love Like Oxygen) : 482 [4Shared][MF] (my boys are doing well)
10. (--) FT Island - 사랑후애 (Lying Love) : 468 [4Shared][MF]
11. (--) Big Bang - 하루하루 (Day By Day) : 449 [4Shared][MF]
12. (-5) Youn Ha - 텔레파시 (Telepathy) : 416 [4Shared][MF]
13. (+2) M - 남자를 믿지마 (Don't Trust Men) : 401 [4Shared][MF]
14. (-6) Lee Hyori - Hey, Mr. Big : 367 [4Shared][MF]
15. (-1) Dynamic Duo (feat. Alex) - Solo : 357 [4Shared][MF]
16. (+1) SG Wannabe & Kim Jong Wook - 운명을 거슬러 (Opposed by Fate) : 344 [4Shared][MF]
17. (-4) Kim Bum Soo - 슬픔활용법 (Sad Inflection) : 318 [4Shared][MF]
18. (+11) Crown J - Fly Boy : 316 [4Shared][MF]
19. (+12) U-Kiss - 어리지 않아 (Not Young) : 272 [4Shared][MF]
20. (+14) TBNY - Hey DJ : 241 [4Shared][MF]
Labels: Soompi K-pop Music Chart
Very Bored !!
Oh!! I'm very bored at home today...because I took MC leave. I weared my necklace to my lion and shot it...hehe...my doll is lovely with my SHINee necklace !! :P right??????
Posted by Me at 3:05 AM 1 comment:
Now I'm in SHINee World !!
Now I'm in SHINee World !! ဟားဟား....Super Junior ပြီးရင် ဒီတစ်သက် ထပ်ကြိုက်ရမယ့်သူ ပေါ်မလာတော့ဘူး ထင်ထားတာ။ ဘယ်ဟုတ်လိမ့်မလဲ။ ဟဲဟဲ..အရင်တုန်းကလဲ ဒီလိုပါပဲ။ Shinhwa ကြိုက်တုန်းကလဲ အဲလိုထင်ခဲ့တာပဲ။ Buzz ကြိုက်တုန်းကလဲ အဲလိုပြောခဲ့တာပါပဲ။ အခု SHINee ကို ကြိုက်တယ်။ ရည်မွန့် အကျင့်ကိုက သူများတွေကြိုက်ပြီးကြာမှ လိုက်ကြိုက်တတ်တာလားမသိပါဘူး။ Super Junior တုန်းကလဲ သူငယ်ချင်းက အရင်ကြိုက်တယ်။ အဲဒီတုန်းက FT Island ကို crazy ဖြစ်နေတာ။ နောက်တော့ သူ့အတွက် dl တွေလုပ်ပေးရင်းနဲ့ ကိုယ်ပါကြိုက်သွားရော။ အခုလဲ SHINee ကို သူကအရင်ကြိုက်တယ်။ ဟင်း အဲဒီတုန်းက SHINee ကို ကြည့်လို့ကို မရဘူး။ ငယ်ကလဲ ငယ်သေးတယ်။ ပိန်ညောင်ညောင်လေးတွေ... :P ။ Show တွေမှာ SHINee လာရင်တောင် ကျော်ကြည့်ခဲ့တာ။ အဲဒီလိုနဲ့ သူတို့ရဲ့ 1st Single Noona is so Pretty ကို ကျော်ခဲ့တယ် ဆိုပါတော့....
Love Like Oxygen ထွက်ထွက်လာခြင်းတုန်းကလဲ မကြိုက်ဘူး။ Music Video ကို တစ်ချက်တော့ ကြည့်လိုက်တယ်။ သိပ်မကြိုက်ဘူး။ (အခုတော့ ကြည့်လို့ကို မ၀နိုင်ဘူး :P )။ Ingikayo 500 ပြည့်မှာ သူတို့ရဲ့ LLO Performance ကို စသတိထားမိတယ်။ ဟယ်...မိုက်တယ်ပေါ့လေ။ အဲဒီကနေ စပြီး SHINee ကို ကြိုက်လိုက်တာ အရမ်းပဲ။ သူတို့ကိုလဲ ကြိုက်သွားရော အရင်တုန်းက သူတို့ရဲ့ Noona Nomu Yappo ကို ပြန်ကြည့်တော့ အရမ်းကောင်းနေသလိုပဲ။ ဟဲဟဲ။ သူတို့ က တာ အရမ်းကို လှတယ်။ အခုတော့ SHINee Performance မှန်သမျှ မလွတ်တော့ပါဘူး။
ှSNINee ရဲ့ Reality Show လဲ ကောင်းတယ်။ မမ တွေနဲ့ သူတို့တွေနဲ့ ဒိတ်လုပ်ကြတာ။ ရီလဲရီရတယ်။ သူတို့ရဲ့ အပြင်ဘ၀လေးတွေကိုလဲ မြင်ရတယ်။ အပိုင်း ၁၀ နဲ့ ၁၁ မှာဆိုရင် သူတို့ အဆောင်မှာ ရိုက်ထားတာ။ သူတို့ အခန်းလေးတွေ အိပ်ခန်းတွေ အကုန်ရိုက်ပြထားတယ်။ အဲဒါလေးတွေ ကြည့်ရင် သူတို့နဲ့ တကယ်ရင်းနှီးသလိုခံစားရတယ်။ Suju တုန်းကလဲ ဒီလိုပဲ Super Junior Full House တုန်းက သူတို့ အဆောင်မှာ ရိုက်ထားတာ။
SHINee ထဲမှာ ပထမဆုံး သတိထားမိတာက Taemin ။ အရမ်းငယ်လို့။ အခုမှ ၁၅ နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ ဆံပင်က မှိုပုံစံ လုံးလုံးလေးနဲ့။ Taemin က အဖွဲ့ထဲမှာ ကတာ အကောင်းဆုံးပဲ။
နောက်တော့ Jong Hyun ကို သတိထားမိတယ်။ LLO စကြည့်တဲ့အချိန်မှာ။ သူ့အသံကောင်းလို့။ ရင်ဘတ်အလယ်တည့်တည့်မှာ မှဲ့လေးရှိတယ်။ Bling Bling Jong Hyun လို့ခေါ်တဲ့ Jong Hyun က အရမ်းစကားများတယ်။ Reality Show မှာလဲ မမ တော်တော်များများက သူ့ကိုကြိုက်ကြတယ်။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်။ ဆုတွေ ဘာတွေရရင် သူက အမြဲ ရှိုက်ကြီးတငင်နဲ့ ငိုတတ်တယ်။
Chrisma Minho....အဖွဲ့ထဲမှာ စကားအနည်းဆုံး။ တော်ရုံနဲ့ ဘာစကားမှကို မပြောတာ။ Super Junior ထဲက Ki Bumie လိုပဲ တအားအေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆွဲဆောင်မှု အရှိဆုံးလို့ပြောရမယ်။ သူ့ကိုလဲ Reality Show မှာ မမ တွေ တအားကြိုက်ကြတယ်။
Key....Ulmighty Key...Key Umma...Taemin ရဲ့ အချစ်တော် Key...Bling Bling နဲ့ Key က အဖွဲ့ထဲမှာ စကား အများဆုံးပဲ။ Key အသံလဲ ကောင်းတယ်။ Key က vocal လဲရတယ် rap လဲ ရတယ်။ သူ့ ကိုယ်သေးသေးလေးနဲ့ Taemin ကို ချီနိုင်တယ်။
အင်း...နောက်ဆုံးမှ သတိထားမိတာက LEADER ONEW... နောက်ဆုံးမှ သိပြီး အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သွားတယ်။ ဘယ်ကနေ ဘယ်လိုကြိုက်သွားမှန်းကိုမသိတော့ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ Onew ဆိုတာလေးက Soft ဖြစ်တာလေးကို ပြောတာ။ သူ့အသံလေးကလဲ Soft ဖြစ်တယ်။ နောက် သူကလဲ Soft ဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ ချစ်စနိုးနဲ့ ToFu လို့လဲ ခေါ်ကြတယ်။ ToFu လိုပဲ ဖြူဖြူနဲ့ Soft ဖြစ်လို့တဲ့...သူ့ fan တွေက အဲလို ခေါ်ကြတာ။
My Fav Pic of ONEW...he is showing his back in STAR GOLDEN BELL Programme !! :D
ShimShimTapa Radio မှာ SHINee က DBSK ရဲ့ Mirotic ကို ဆိုသွားတာ အရမ်းကောင်းတာပဲ။ SHINee မို့လို့ မျက်နှာလိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်ကိုကောင်းတာ။ အရမ်းအံ့သြသွားတယ်။ Studio မှာ သေသေချာချာဆိုတာမဟုတ်ပဲ Radio မှာ Live ဆိုတာ အဲဒီလောက်တောင် ကောင်းတာ။ အထူးသဖြင့် Jong Hyun နဲ့ Key အသံက မိုက်တယ်။ Onew အသံကတော့ ရည်မွန့်အကြိုက်မို့ ဘယ်အချိန်မဆို ဘယ်လိုမဆိုကောင်းပြီးသား (ဒါတော့ မျက်နှာလိုက်တာ) ... SHINee Hwaiting !!!
Download MP3 [MF]
Download MV [MF]
FT Island - Colorful Sensibility Part2Single
အား...FT Island လဲ အခွေသစ်ထွက်တယ်။ Mini Album လေး။ ဒီတစ်ခါလဲ ကောင်းတာပဲ။ Hong Gi အသံက တော်ရုံသိပ်မကြောင်တတ်ဘူး။ Show တိုင်းမှာလိုလို သူ့အသံနိုင်တယ်။ ဒီနေ့ သီချင်းအသစ်တွေ နားထောင်စရာတွေ အများကြီးပါလား။
01. 너를 사랑해 (love is...)[MF]
03. 너의 안부를 물을 때[MF]
05. 내 오랜 그녀와 해야 할 일[MF]
06. 그대는 사랑입니다 (Remix)[MF]
Mario ရဲ့ 1st Album နားထောင်ဖြစ်တယ်။ တစ်ခွေလုံးကြိုက်တယ်။ မိုက်တယ်။ Pop တွေ နားထောင်လိုက် .. Rap Hip-hop Rock တွေ နားထောင်လိုက်နဲ့။ ဒီနေ့ တစ်နေ့လုံး သီချင်းတွေ နားထောင်ဖြစ်နေတယ်။
02. 난 니꺼[MF]
03. 여기에 있어요 (feat. 김보아)[MF]
04. 수퍼맨 (feat. 영지)[MF]
05. 너만 괜찮다면[MF]
06. I Will[MF]
07. Good bye[MF]
08. 난 너에게(feat. 박혜경)[MF]
09. 두서없는 노래[MF]
10. Good Bye (Cool Mix) (feat. Crown J)[MF]
11. 난 니꺼 (Radio Edit ver.)[MF]
Labels: Kpop Download
Super Junior - Xanadu OST
ဒီနေ့ နေမကောင်းတာနဲ့ MC leave ယူလိုက်ရတယ်။ အဲဒါနဲ့ အိမ်မှာ အေးဆေးနွေးထွေးပဲ ဟဲဟဲ။ ကော်ဖီလေးသောက်...ဒေါင်းလုပ်လေးလုပ်...ကြည့်စရာကြည့်တာလေးကြည့်။ z-degrees ကိုသွားကြည့်တော့ အခွေသစ်တွေ အများကြီးပဲ။ အဲဒါနဲ့ ဒေါင်းလုပ်တွေလုပ်။ Super Junior ရဲ့ xanadu ost အခွေလေးကို နားထောင်ကြည့်တယ်။ Hee Chul အသံလေးက ကောင်းလိုက်တယ်။ hee chul ကလေ ကောင်းကောင်းဆိုတတ်ရဲ့သားနဲ့ တစ်ခါတစ်လေ ကောင်းကောင်းမဆိုဘူး။ အခု ဒီသီချင်းမှာ သူဆိုထားလေး သိပ်ကောင်းတာပဲ။ Kang In အသံကတော့ ပြောစရာမလိုပါဘူး။ ကောင်းပြီးသားပဲဟာ... Love Suju....
01. Kang In - Suddenly (with. Choi Yoo Ha) [MF]
02. Kim Hee Chul - Don't Walk Away (with. Kim Sung Ki, Hong Ji Min, Kim Hee Won) [MF]
Finally !! I got it !! I got it !!
တမျှော်မျှော်နဲ့ စောင့်လိုက်ရတာ... အခုတော့ ရပြီ...PhotoBook လေးက မိုက်တယ်။ အရမ်းကွာလတီကောင်းတယ်။ ကြည့်ချင်လှပြီ။ သူငယ်ချင်းကို စောင့်နေတာ။ တူတူကြည့်ဖို့။ ဟိုတစ်နေ့ကတောင် မနေနိုင်ပဲ DVD 1 ကို ကြည့်လိုက်သေးတယ်။ Super Show ကြည့်တုန်းက အချိန်တွေကို ပြန်ရောက်သွားသလိုတောင် ခံစားရတယ်။ hee chul ရဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ပဲ မပါတာ။ ကျန်တာကတော့ ထိုင်းကို လာသွားတုန်းကနဲ့ တော်တော်ကို တူပါတယ်။ အဲဒီခံစားမှုလေး ပြန်ရတာပေါ့။ အား....သူတို့ကို သတိရတယ်။ SM Town Concert ကိုကြည့်ချင်လှပြီ......................
Posted by Me at 11:38 PM 1 comment:
Onew - Forever more (I'll be the one)
youtube ထဲက Shinee တွေလိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့... Onew ရဲ့ Forever More ဆိုထားတာလေး သွားတွေ့တယ်။ အခု အဲဒီသီချင်းလေး ကို အရမ်းကြိုက်နေတယ်။ သီချင်းစာသားလေး သိပ်ကြိုက်တာပဲ။ ရိုးရိုးလေး။ အဲဒါနဲ့ မူရင်း ဆိုထားတာကိုလဲ လိုက်ရှာကြည့်ပြီး နားထောင်ဖြစ်တယ်။ Ingram James ဆိုထားတာ။ ၁၉၉၉ တုန်းက သီချင်းလား မသိပါဘူး။ မျက်နှာလိုက်ပြီးပြောရရင် Onew ဆိုထားတာလေးကို ပိုကြိုက်တယ်။ လူကို ကြိုက်လို့လဲနေမှာပါလေ။
Forever More(I'll be the one) - Onew(Shinee)[MF]
Forever More(I'll be the one) - Ingram James(Original)[MF]
I'll be the one to love you........forever more
Posted by Me at 11:32 PM4comments: